Zaza ny iray tamin’ireo razana nofongorina, tao anation’ny andro maromaro. Niampy roa koa ny olona nosamborina ka lasa valo no naiditra am-ponja vonjimaika, taorian’ny niakaran’izy ireo Fampanoavana tao amin’ny lapan’ny Fitsarana tao Antsirabe ny sabotsy lasa teo.
« Ny lehilahy iray amin’ireo roa voasambotra dia vadina vehivavy mpampianatra iray ao amin’ny sekoly ao Mahazoarivo, izay efa nosamborina iray andro talohan’io », hoy ny kaomisera Labarre Guy, ao amin’ny foiben’ny Kaomisaria, ao Antsirabe. Vonoan’olona sy fanaovana trafikana taovan’olona no vesatra iampangana azy valo.
« Ray aman-dreny iray ankehitriny no eo an-dalam-panamarinana raha ilay zanak’izy ireo ireo, very efa herintaona, io hita faty tao amin’ilay tanàna tao Antanambao Vélodrome io », hoy ihany ny lehiben’ny polisy ao Antsirabe. Amin’izao fotoana izao, dia misy olona avy amin’ny lafy valon’ny Nosy, tonga ao Antsirabe na nandefa taratasy manontany raha toa ka anisan’ny hita ao Antanambao Vélodrome ny fatin’ny havany, efa tsy hita popoka. Nidina any an-toerana ny ekipan’ny Borigadin’ny sampana heloka bevava ao amin’ny Polisim-pirenena, mandray an-tanana ny raharaha, izay ahitana polisy siantifika sy Dokotera manao fikarohana amin’ny famantarana ireo olona dimy maty hita ireo.